Usoro akwara a (ọ bụ ya na-acha anụnụ anụnụ na foto a) si na nkọlọ anyị ruo n’eriri afọ anyị
ỤBỤRỤ ole ka i nwere? Ọ bụrụ na ị sịrị na ọ bụ “otu,” ị zatara ya. Ma, e nwekwara ihe ọzọ na-arụ ọrụ ka ụbụrụ. Ọ bụ usoro akwara pụrụ iche dị anyị n’ahụ́. N’ihi ọtụtụ ọrụ usoro akwara a na-arụ, ndị sayensị bidoro ịkpọ ya “ụbụrụ nke abụọ.” Ma, ụbụrụ nke abụọ a abụghị n’isi ka ọ dị, kama, ọ bụ n’ime afọ anyị.
Ọrụ ahụ́ anyị na-arụ iji gbarie nri anyị riri ma mee ka anyị si na ya nweta ume abụghị obere ọrụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mma na e mere ka ụbụrụ anyị na-ahapụrụ usoro akwara a ọrụ a.
Ọ bụ eziokwu na akwara dị n’ụbụrụ karịrị usoro akwara a dị n’afọ, ma ọ dịkwa mgbagwoju anya. Dị ka ihe atụ, n’usoro akwara a dị n’afọ, e nwere ụmụ irighiri ihe na-ezirịta ozi n’ime ya dị ihe dị ka narị nde abụọ ruo narị nde isii. Ụmụ irighiri ihe ndị a niile so na-eme ka nri anyị riri na-agbari. Ndị sayensị sịrị na ọ bụrụ na ụbụrụ arụwa ihe usoro akwara afọ a na-arụ, akwara ndị ga-adị n’ụbụrụ ga-agba okpotokpo gabiga okè. Akwụkwọ bụ́ The Second Brain, sịrị: “Ịhapụ [ebe na-agbari nri n’afọ anyị] ka ha na-ahazi onwe ha na-eme ka a ghara inwe nsogbu, meekwa ka ọrụ dị mfe.”
“ỤLỌ ỌRỤ KEMIKAL”
Ka nri anyị riri nwee ike ịgbari nke ọma, afọ anyị kwesịrị ịna-emepụta kemikal na-agbari nri n’oge kwesịrị ekwesị ma wega ha n’ebe a chọrọ ha. Otu ọkà mmụta aha ya bụ Gary Mawe kwuru na ebe na-agbari nri n’afọ anyị dị ka “ụlọ ọrụ kemikal.” Otú kemikal ndị a si arụ ọrụ dị ezigbo ịtụnanya. Dị ka ihe atụ, eriri afọ anyị nwechara mkpụrụ ndụ ndị dị n’akụkụ ya na-enyere ya aka ịmata ụdị kemikal dị ná nri anyị riri. Ihe a na-enyere akwara ndị dị n’eriri afọ anyị aka ịma ụdị kemikal ha ga-ewepụta ga-enwe ike ịgbari nri anyị riri ka ahụ́ anyị nwee ike ịmịkọrọ ya. Ihe ọzọ bụkwa na akwara ndị ahụ na-achọpụta ihe ụfọdụ dị ná nri anyị riri ka ọ mata otú ọ ga-esi agbanwetụ kemikal ndị ahụ na-agbari nri ka ha nwee ike ịgbari nri ahụ nke ọma.
Were ya na ebe nri si aga n’ime afọ gị dị ka tebụl ogologo ọtụtụ ndị nọ na-arụ ọrụ. Ọ bụkwa ihe ahụ a na-akpọ ụbụrụ nke abụọ na-ahazi otú ọrụ ahụ si aga. Otú o si eme ka nri na-aga n’ime afọ anyị bụ ịna-eme ka eriri afọ anyị na-akpakọta onwe ya. Ọ na-agbanwekwa ikike eriri afọ ahụ ji na-akpakọta nakwa ugboro ole ọ ga na-akpakọta ka nri nwee ike ịna-aga n’usoro n’ime eriri afọ.
Usoro akwara ahụ dị n’afọ na-ahụkwa maka ichebe afọ anyị. Nje na-akpata ọrịa nwere ike ịdị ná nri anyị riri. Ọ bụ ya mere ihe dị ka ụzọ asatọ n’ime ụzọ iri nke ihe na-alụso nje ọgụ n’ahụ́ mmadụ ji dịrị n’afọ. Ọ bụrụ na anyị erie nri ọtụtụ nje dị na ya, usoro akwara a ga-eme ka eriri afọ anyị bido ịna-akpakọta otú ga-eme ka anyị gbọpụta nje ndị ahụ ma ọ bụkwanụ si n’afọ ọsịsa nyụpụ ha.
OTÚ AFỌ ANYỊ NA ỤBỤRỤ ANYỊ SI EMEKỌRỊTA IHE
Ọ bụ eziokwu na ọ dị ka usoro akwara a ọ̀ nọọrọ onwe ya, ya bụ, ụbụrụ anaghị atụrụ ya ụka. Ma, ha abụọ ka na-emekọkwa ihe ọnụ mgbe niile. Dị ka ihe atụ, ọ bụ usoro akwara a na-ahụ maka ihe ndị na-ezigara ụbụrụ ozi na i kwesịrị iri nri nakwa otú nri ị ga-eri ga-aha. Ọ na-emekwa ka ụbụrụ gị mara mgbe i rijuru afọ; o nwekwara ike ime ka agbọ nuo gị ma i rifee nri ókè.
Tupu gị ebido ịgụ isiokwu a, o nwere ike ịbụ na o nwetụla mgbe ọ dị gị ka ò nwere ihe jikọrọ ụbụrụ gị na ebe nri si aga. Dị ka ihe atụ, ị̀ chọpụtala na i richaa nri ụfọdụ nwere mmanụ, obi ana-atọ gị ụtọ? Ndị na-eme nchọpụta kwuru na ihe kpatara obi ji adị gị ụtọ bụ na usoro akwara ahụ dị gị n’afọ na-ezigara ụbụrụ gị ozi obi ụtọ. Ụbụrụ gị akpalizie gị ibido nwewe aṅụrị. O nwere ike ịbụ ya mere ndị mmadụ ji achọ iri ụdị nri ndị a a sịrị na-eme obi ụtọ ma ha nọrọ ná nchegbu. Ndị sayensị na-achọ otú ha ga-esi na-akpali usoro akwara ndị a ime ka mmadụ nwewe obi ụtọ, ka ha jiri ya na-agwọ ndị dara mba n’obi.
Ihe ọzọkwa na-egosi na o nwere ihe jikọrọ afọ anyị na ụbụrụ anyị bụ ihe ahụ ndị mmadụ na-akpọ obi ịwụnye mmadụ n’afọ. O nwere ike ịbụ na ihe na-akpata obi ịwụnye mmadụ n’afọ bụ na usoro akwara ahụ dị anyị n’afọ na-eme ka ọbara si n’afọ anyị pụọ mgbe anyị nọ ná nchegbu. Ihe ọzọkwa bụ na ụbụrụ anyị nwere ike ime ka agbọ nuo anyị ma anyị nọrọ ná nchegbu. Otú o si eme ya bụ na ọ na-agwa usoro akwara ndị ahụ dị anyị n’afọ ka ha mee ka eriri afọ ụfọdụ kpakọta ọnụ. Ndị ọkachamara na-ekwu na ọ ga-abụ otú a ụbụrụ na eriri afọ si emekọrịta ihe mere nchegbu ji emetụta eriri afọ anyị.
Ọ bụ eziokwu na usoro akwara ahụ dị anyị n’afọ nwere ike ime ọtụtụ ihe ndị a, ma anyị enweghị ike iji ya chee echiche. N’eziokwu, usoro akwara dị anyị n’eriri afọ abụghị ụbụrụ. Anyị agaghị ejili ya rọọ egwú, gbakọọ ego anyị, ma ọ bụkwanụ mee ihe omume e nyere anyị n’ụlọ akwụkwọ. Ma, otú usoro akwara a si arụ ọrụ ka na-agbagwoju ndị sayensị anya. O nwekwara ọtụtụ ihe gbasara ya ha na-achọpụtabeghị. N’ihi ya, mgbe ọzọ ị chọrọ iri nri, cheretụ, buru ụzọ chee echiche gbasara ọtụtụ ihe na-aga ime n’ime afọ gị, dị ka, otú eriri afọ gị ga-esi achọpụta ụdị nri ịna-eri, ma nje ọ̀ dị na ya, na ụdị ozi ọ ga-ezigara ụbụrụ gị maka nri ahụ.